ဂျပန်သတင်းထောက်တဦး၏ မှတ်စုများ – အပိုင်း (၃) | MoeMaKa Burmese News & Media
ဗေဒင်၊ ယတြာနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအုပ်ချုပ်သောတိုင်းပြည်
ဗေဒင်နဲ့ကမ္ဘာကျော်တဲ့ မြန်မာပြည်ကို သွားလည်ခွင့်ကြုံရင် ဗေဒင်ဆရာတယောက်ဆီမှာ ဗေဒင်ဝင်မေးကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ရန်ကုန်က ရွှေတိဂုံဘုရားစောင်းတန်းမှာ အိမ်တန်းလေးတွေနဲ့တူတဲ့ ဗေဒင်ဟောခန်းတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီဗေဒင်ခန်းတွေထဲမှာ ဗေဒင်ဆရာတွေက ဗေဒင်မေးချင်သူတွေကို စောင့်နေပါတယ်။
အိန္ဒိယအနွယ်ဖွား အမျုိးသမီးကြီးတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ ကျနော်ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့မွေးနေ့၊ မွေးနှစ်ကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါမှာ သူက စက္ကူစာရွက်တရွက်ပေါ်မှာ ဇာတာပုံတခု ဆွဲလိုက်ပြီး အနာဂတ်မှာ ကျနော့်အတွက် ကံကောင်းစေမယ့် အလုပ်အကိုင်၊ ကံကောင်းမယ့် အရောင်၊ ကံကောင်းမယ့် အရပ်မျက်နှာတွေကို ဟောပါတော့တယ်။
“ဒီလကုန်တဲ့အထိ အမည်းရောင်တွေမ၀တ်နဲ့နော်။ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်တတ်တယ်” သူက သတိပေးပါတယ်။
“ဒါပေမယ့် မပူပါနဲ့” ဆိုပြီးတော့လည်း ယတြာတွေပေးပြန်ပါတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားစောင်းတန်းမှာဝယ်ဖို့ စာရင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ပစ္စည်း အမယ်တွေကတော့ ထီးတလက်၊ စက္ကူယပ်တောင်က ကိုးခု၊ ရွှေပြား သုံးပြား၊ ပန်းခိုင်တခိုင်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီပစ္စည်းအမယ်တွေကို ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ကျနော့်ဘိုးဘေးတွေရဲ့အုတ်ဂူရှေ့မှာချပြီး ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင် အားလုံးကောင်းသွားမယ်လို့ ဗေဒင်ဆရာမက အသေအချာအာမခံလိုက်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့အားလုံး မိန်းမတွေပါရှင်” လို့ လူလုံးပြရတဲ့အဖြစ်မျိုးပါ။
အမျုိးသမီးဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ထားပြီးပါပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပေါ့ ….
ဗေဒင်ယတြာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင် မနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားမှာထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ ထိပ်တန်းစစ်အစိုးရခေါင်း ဆောင်တွေရဲ့ ညစာစားပွဲမြင်ကွင်းကတော့ အံ့အားသင့်စရာမြင်ကွင်းပါ။ အရပ်သားအစိုးရကို အာဏာမလွှဲခင် တလအလိုလောက်မှာ၊ စစ်အစိုးရရဲ့ နံပါတ် (၁) ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၊ လက်ရှိသမတလုပ်နေတဲ့ ဦးသိန်းစိန်၊ ညစာစားပွဲတက်ရောက်လာတဲ့ တ ခြားလူတွေ အားလုံး မြန်မာ့ရိုးရာလုံချည်တွေဝတ်ထားကြတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။ ဒါ သက်သက်အပျော်လုပ်ကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
“သေချာတာပေါ့ဗျာ၊ အဲဒါယတြာချေတာပေါ့” လို့ မြန်မာပြည်က သတင်းထောက်တယောက်က ပြန်ပြောပြပါတယ်။
အမျိုးသမီးဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့က တိုင်းပြည်အာဏာကို မကြာခင်မှာယူလိမ့်မယ်လို့ ဗေဒင်ဆရာတွေက ဟောတာကြောင့်လို့ ဆိုကြပါ တယ်။ အမျိုးသမီးဦးဆောင်တယ်ဆိုတာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရည်ညွှန်းတာပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင် ထမီနဲ့တူတဲ့လုံချည်တွေကိုဝတ်ပြဖို့ဖြစ်လာပြီး “ကျွန်တော်တို့အားလုံး မိန်းမတွေပါရှင်” လို့ လူ လုံးပြရတဲ့အဖြစ်မျိုးပါ။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အမျုိးသမီးဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ထားပြီးပါပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပေါ့လေ။
တကမ္ဘာလုံးရဲ့အမြင်မှာတော့ မြန်မာပြည်က စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအပေါ် နှိပ်ကွပ်တယ်။ အနောက်ကမ္ဘာကိုလည်း အာခံတဲ့ ခေါင်းမာဂိုဏ်းသားတွေပေါ့။ အမြဲတမ်း စစ်ဝတ်စုံတွေနဲ့ အခန့်သားတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ လုံချည်ဝတ်ပြီး ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့လည်း တကယ့်ကို ရုပ်တည်နဲ့ အမှန်အကန်ထွက်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ် သဏ္ဍာန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်လောက်တောင် ကြောက်လန့်နေသလဲဆိုတာကို ထွက်ပြီးဝန်ခံသလိုဖြစ်သွားပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင်လည်း စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကြောက်ကြီးကြောက်နေတယ်ဆို တာကို သတိထားမိမှာပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဓာတ်ပုံပိုစတာတွေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကို ဘယ်မှာမှ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မစ္စက်အဲရစ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ခင်ပွန်းသည် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး မိုက် ကယ်အဲရစ်နာမည်ကို စွဲပြီးခေါ်တာပဲ။ တခါတလေကျတော့ အဆိပ်ပြင်းတဲ့မြွေဟောက်မ စသဖြင့်ခေါ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အသံလွှင့်လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေကို အိုင်ယာလန်က ရော့ခ်တီးဝိုင်း ယူတူးအဖွဲ့ရဲ့သီချင်းတွေမလွှင့်ဖို့ တားမြစ်ထားပါတယ်။ ယူ တူးအဖွဲ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုချီးကျူးပြီး သီချင်းဖွဲ့ဆိုခဲ့တာကို လက်တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ လူတွေပြောကြတဲ့ နောက်အကြောင်းတခုကတော့ အင်္ဂလိပ်စာလုံး U2 ကိုပြောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် SU လို့ အသံထွက်လို့ပါတဲ့။ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်အသံထွက်ပဲ မဟုတ်လား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်သမျှ အပြတ်ရှင်းချင်တဲ့နေရာမှာ နောက်ဆုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့အဖေ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တောင် အစိုးရက အဆက်ဖြတ်ချင်နေတာပါ။ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့ ခွဲထွက်ရေးနဲ့ လွတ်လပ်ရေးတောင်းဆိုမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာ အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးရဲ့သင်္ကေတပါပဲ။
နောက်တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဟာ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီး စစ်အစိုးရကို ထိပ်တိုက်တွေ့လာပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်၊ တပ်မတော်ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်ခဲ့သလို၊ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုရဲ့သင်္ကေတ၊ စစ်တပ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာစေတဲ့သင်္ကေတဖြစ်လာမှာကို စစ်အစိုးရက ထိတ်လန့်ပုံပါပဲ။ ဒါကြောင့် ငွေစက္ကူပေါ်က ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရုပ်ပုံတွေနေရာမှာ တခြားအရုပ်တွေနဲ့ အစားထိုးလိုက်ပါတယ်။
“စာသင်ခန်းထဲမှာ သမိုင်းသင်တဲ့အခါ ဆရာတွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေအကြောင်း အသားပေးပြောတာမျိုး မရှိတော့ ဘူး” လို့ ဆိုဖီယာတက္ကသိုလ် Sophia University က ပါမောက္ခကီနီမိုတို Kei Nemoto က ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်ကိုလည်း ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေခဲ့ဖူးတဲ့ အင်္ဂလိပ်အိမ်ပုံစံနဲ့ အိမ်ကြီးထဲမှာ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ငယ်ငယ်ကနေခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စာကြည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းတွေကို နဂိုအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်ကို ဗိုလ်ချုပ်တို့လုပ်ကြံခံရတဲ့ ဂျူလိုင် ၁၉ အာဇာနည်နေ့လို နေ့မျိုးကလွဲရင် ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာ ပိတ်ထားပါတယ်။
“ပြည်သူတွေရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီကို ထုံကူးသွားမှာကို အစိုးရက စိုးရိမ်နေတာ” လို့ သံတမန်တဦးက ပြောပါတယ်။
အစိုးရက ဘယ်လိုပဲဖျောက်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားကြိုးစား နိုင်ငံရဲ့ဖခင်ကို ဖျောက်ဖျက်လို့မရပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအထ္ထုပတ္တိစာအုပ်တွေကို စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းချပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ အစိုးရကကျင်းပတဲ့ အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ကြားပြီးကတည်းက စာအုပ်တွေလည်း ရောင်းကောင်းတယ်နေတယ်လို့ စာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ပြောပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဂူဗိမ္ဗာန်ရှေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆုတောင်းနေတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ ၉ နှစ်အတွင်းမှာ ပထမဆုံးပါပဲ။
ရန်ကုန်က လမ်းဘေးစာအုပ်ဆိုင်တဆိုင်က ဆိုင်ပိုင်ရှင်က နေ့တိုင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းစာအုပ်တွေ အုပ်ရေ ၁၀၀ လောက် ရောင်းရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျနော်က စကားပြန်ကတဆင့် အကယ်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကို တင်ရောင်းရင်ရော ဘယ့်နှယ်နေမလဲလို့ မေးလိုက်ပါတယ်။
စကားပြန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့နေရာမှာ “အဘွားကြီး” ဆိုတဲ့စကားဝှက်ကိုသုံးပြီး ပြန်မေးပေးပါတယ်။ ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေ၊ သတင်းပေးတွေကြားသွားမျာ စိုးရိမ်ရလို့၊ လူရှေ့သူရှေ့မှာ အခုလိုပဲ စကားဝှက်သုံးတာက ပြည်သူတွေကြားမှာ အသားကျနေပါပြီ။
စာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က “ချက်ချင်းရောင်းအားတက်သွားမှာပေါ့” လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။ အနားက နောက်ထပ်စာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်း “ဘာ ပြောကောင်းမလဲ။ လူတွေဝယ်လွန်းအားကြီးလို့ ပုံနှိပ်စက်တောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး” လို့ ၀င်ဖြေလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက် တဟားဟား ပွဲကျနေပါရော။၊ အနားကလူတွေတောင် ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့် လှမ်းကြည့်ကြတဲ့အထိပါပဲ။
စာအုပ်ရောင်းသမားနှစ်ယောက်ကတော့ အစိုးရကို သရော်တော်တော် ဝေဖန်လိုက်ရလို့ ကျေနပ်သွားမယ်ပုံပါပဲ။ မြို့ထဲမှာ အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရတာလည်း အရင်လောက် တင်းမာမနေတော့သလိုမျိုးတော့ ရှိပါတယ်။
ဇူလိုင်လမှာ အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမတတို့ တွေ့ဆုံစကားပြောလို့၊ ကြီးနှစ်ကြီး တွေ့ဆုံတဲ့အဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သလို၊ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကလည်း အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုလည်း အရင်လို ဒေါ်စုကြည်လို့မသုံးတော့ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့ အ ပြည့်အစုံ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာပါတယ်။
“နောက်တခါ ကျနော်ပြန်လာရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စာအုပ်တွေ ခင်ဗျားတို့ဆိုင်ပေါ်ကိုရောက်နေမှာ သေချာပါတယ်ဗျာ” လို့ စာအုပ် ဆိုင်ပိုင်ရှင်နှစ်ယောက်ကို ကျနော်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က ဗေဒင်ဆရာလိုလို၊ ဘာလိုလိုပေါ့။
Top Myanmar military regime officials cross-dressed to drive away evil spirits
If you haveachance to visit Myanmar, known worldwide for its fortune-telling, it isagood idea to have local diviner check your future.
There isabuilding that looks likearow house on the premises ofapagoda in Yangon, the old capital of Myanmar, and fortune-tellers wait for customers in spaces separated by partitions.
I sat in front ofawoman of Indian descent. After I told the fortune-teller my birth date and year, she drewarough celestial map onapiece of paper, and in detail indicated the future in my work, colors and directions that she claims would bring me fortune.
“Don’t wear black clothes until after next month. You might haveatraffic accident,” she told me.
“But don’t worry,” she said as she wrote down how to drive away evil spirits. She listed up various items I should buy at stalls on the premises of the pagoda, including an umbrella, nine paper fans and three gilts, as well asabunch of flowers. She then advised me to dedicate these items before the tablets of my deceased ancestors and offeraprayer. If I followed her advice, she assured me I would be all right.
A Myanmar state-run TV station airedascene ofadinner meeting of top military-regime officials in February last year,amonth before it handed over power toacivilian government. The scene came asasurprise as then supreme leader Than Shwe, current President Thein Sein and all the others were cross-dressed in folk clothes called “longyi.” It was not some form of entertainment for the party.
“Undoubtedly, it was yadaya (a ceremony to drive away evil spirits),” recallsalocal journalist. Many fortune-tellers reportedly predicted that an administration led byawoman (Aung San Suu Kyi) would take over the reins of government soon.
The top officials of the military regime were cross-dressed as if to tell the public, “We’re all women.” In other words, they were relieved after showing to the public that the establishment ofawoman-led administration was achieved.
Myanmar’s military regime has given the worldahard-line image by suppressing pro-democracy forces and confronting the Western world. Top officials in the military regime, who are usually dressed in military clothes and appear dignified, showed their cross-dressed appearance to the public inaserious manner. They looked like they admitted that they were afraid of Suu Kyi, indicating their human touch.
If you walk around Myanmar, you’ll definitely notice that military regime leaders greatly fear Suu Kyi. No posters of the opposition leader nor books she authored can be seen anywhere in the country. State-run media outlets had called her “Mrs. Aris,” which is the family name of her late British husband, anda“female cobra,” which can mean the most poisonous and dangerous woman.
In Myanmar, broadcasters are prohibited from airing songs of well-known Irish rock band “U2” in retaliation for the group singing songs that praise Suu Kyi’s pro-democracy campaign. However, there were rumors that if one writes “U2” onapiece of paper and flips it, the letters can read “SU” which is pronounced as Suu Kyi in Burmese.
Myanmar’s military regime has wanted to rid the world of Suu Kyi but its attitude toward and distance from her father, Gen. Aung San, who is regarded as the father of Myanmar’s independence has been delicate.
Myanmar has recognized the general asasymbol of the unity of the country since its independence as its regime has been threatened by ethnic separatist and independence movements by minorities.
Ironically, however, the general’s daughter has led pro-democracy movements and confronted the military regime.
Since Aung San is the father of Myanmar’s military andasymbol of the military, the regime apparently feared that he would turn intoasymbol of pro-democracy movements and fuel the public’s anti-military regime sentiment. The regime replaced the portrait of the general on banknotes with other pictures.
“In history classes, teachers no longer emphasize the general’s achievements,” says Sophia University professor Kei Nemoto.
I visited Bogyoke Aung San Museum, the British-style former residence of the general, where Suu Kyi spent part of her childhood and her father’s study room and bedroom are preserved as they were, but it was closed.
The museum reportedly opens only on limited days on an irregular basis, such as on Martyr’s Day on July 19 when the general was assassinated.
“The government is still wary that people’s sense of affinity toward Suu Kyi will increase,” saysalocal diplomatic source.
Still, the military regime cannot eradicate the presence of the “father of the country.” Books on the biography of Gen. Aung San are on sale at bookstores. An employee of one of the stores said these books have been selling well since Suu Kyi was invited to attendagovernment-sponsored ceremony at the Martyrs’ Mausoleum to mark Martyr’s Day in 2011, and offeredaprayer in front of his tomb for the first time in nine years.
A book vendor was selling books on the biography of the general at an open-air market in Yangon. “At least 100 such books are soldaday,” he said.
I asked the vendor throughaguide what would happen if he put books authored by Suu Kyi on sale at his stall. In interpreting my question into Burmese, the guide replaced Suu Kyi’s name with the Burmese word that means, “grandma.” It is an established custom for people in Myanmar to replace her name with “grandma” in public for fear that secret police or an informer may hear it.
He replied, “Our sales would drastically surge.”
A neighboring bookstall keeper said, “Printers’ capacity to produce her books would be insufficient to fill the demand,” and the two vendors burst into laughter so loud that people around them noticed.
They might be satisfied because they sarcastically criticized the government. The tension in the town appeared to have somewhat loosened.
In July, the government and Suu Kyi entered full-scale dialogue, while state-owned media outlets now add an honorific title to her name.
I left the market after telling the two laughing book vendors, “I’m sure you’ll be selling Suu Kyi’s books when I come here again.” I felt just likeafortune-teller. (By Takayuki Kasuga, Foreign News Department)